WordPress.com? Ity no antony hampiasako azy voalohany. | Martech Zone
WordPress.com? Ity no antony hampiasako azy voalohany.
Alarobia, Martsa 13, 2013 Alakamisy 14 martsa 2013 John Blue
Fa maninona WordPress.com?
WordPress dia iray amin'ireo lehibe sehatra bilaogy misy ary misy endrika roa, WordPress.com ary WordPress.org.
Endrika voalohany, WordPress.com, dia serivisy ara-barotra manome fitaovana fanaovana bilaogy maimaim-poana sy karama (mampiasa WordPress mazava ho azy) amin'ny tranonkala. WordPress.com dia mampiasa ny rindrambaiko ho serivisy modely (aka SaS), mitazona ireo fitaovan'ny rindrambaiko fitorahana bilaogy ary mikarakara zavatra toy ny fiarovana sy fandefasana atiny (bandwidth, fitehirizana sns.).
Ny endrika faharoa, WordPress.org, dia ny vondrom-piarahamonina izay manampy amin'ny fampandrosoana sy fitazonana ny loharano misokatra kinova an'ny rindrambaiko WordPress. Ny fitaovan'ny bilaogy WordPress iray manontolo dia azo alaina sy apetraka amin'ny solosaina, mpizara na mpamatsy fampiantranoana izay safidinao. Eo am-pelatananao ny fanamboarana ary ianao no tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny fiarovana sy ny fandefasana atiny ilaina.
Fa maninona ianao no mifantina iray amin'ny iray hafa?
Andao atomboka amin'ny antony WordPress.com aloha. Tadidio fa manome ny rindrambaiko vonona handeha ho bilaogy izy ireo. Ny fametrahana anao tompon'andraikitra, raha tianao, dia mamolavola ny fijery ny bilaoginao. Ny zavatra toy ny lohahevitra na ny fisehoseho dia azonao omena. Misy ny lesoka ary manome sosokevitra WordPress.com. WordPress.com koa dia manolotra andiana habe tsara gadget ary Plugins, izay fitaovana fanaovana bilaogy kely izay manampy fampiasa sy fiasa ao amin'ny bilaoginao. Ohatra, mila index an'ireo lahatsoratra bilaogy taloha ianao? Misy ny Widget archive. Te hampiseho ny sarinao farany avy ao amin'i Flickr? Misy Widget Flickr.
WordPress.com koa dia orinasa ara-barotra, manolotra entana fanampiny hanampiana amin'ny fanatsarana ny bilaoginao. Ireo fanampiny ireo dia misy vidiny, na dia tsy lafo aza, ary manampy amin'ny fananganana bilaoginao bebe kokoa. Ohatra, ireo lohahevitra tsy misy fotony dia mahafinaritra tsara hanombohana bilaogy. Fa raha mila sary na fisie sasany hifanaraka akaiky kokoa amin'ny fombanao ianao dia azonao atao ny mividy a premium theme.
Rehefa manomboka bilaogy amin'ny WordPress.com ianao, amin'ny kinova maimaimpoana dia hahazo anarana domain toa izao: your-blog-name.wordpress.com. Ohatra: farmbrownsays.wordpress.com. Raha te hanana anarana domain non-wordpress.com ianao dia mila manavao ny serivisinao hampiasa a anaran'ny habaka manokana.
WordPress.com dia orinasa ara-barotra indray mba hahafahan'izy ireo mandefa doka amin'ny tranonkala blog maimaim-poana, indraindray. Azonao atao ny misoroka ny fisehoan'ireo doka ireo ao amin'ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny fividianana ny Sarobidy bundle. Ny Value Bundle dia manome toerana fanampiny (manan-danja raha manana sary betsaka ianao), mamela anao hanana lohahevitra manokana sy anaran'ny sehatra manokana.
Misy ferana sasany amin'ny fampiasana WordPress.com izay mety mila dinihinao. Tsy azo atao ny mampiasa plugin tadiavinao raha tsy mbola omen'ny WordPress.com ofisialy azy io fanompoana. Ohatra, te hampiasa ny Tsiambaratelo Seksi plugin? WordPress.com dia tsy manana SexyBookmarks ho ampahany amin'ny serivisy plugin fototra. Te hampiasa ny NextGen plugin fitantanana haino aman-jery? Ity koa dia tsy tafiditra ao amin'ny suite plugin WordPress.com fototra.
Tsy midika akory izany hoe WordPress.com dia tsy manana rohy fizarana (izy ireo dia mahita mizara) na fitantanana haino aman-jery (izy ireo koa dia manana, jereo Tranomboky media). Ny antony mamepetra ny fampiasana plugins dia satria plugins dia rindrambaiko izay tokony hotehirizina rehefa mandeha ny fotoana mba hiantohana ny serivisy WordPress.com miasa. Ny famelana plugin misy anao dia mety hahatonga ny serivisy WordPress.com hisosa ary, ao anatin'izany dia miteraka olana amin'ny bilaoginao.
Maninona no mampiasa WordPress.com? Ny antony lehibe indrindra dia ny vidiny, na maimaim-poana na ny bundle premium, dia ambany noho ny fampiantranoana ary foana tranokala WordPress.org anao manokana. Eritrereto ny zavatra atolotry ny WordPress.com, amin'ny kinova maimaimpoana azy: sehatra bilaogy vonona handeha amin'ny mpizara tranonkala tantaniny sy karakarain'izy ireo. Ary ho an'ireo fonosana premium, vidiny avy amin'ny $ 99 amin'ny $ 299 (UPDATE 2013 03 13: $ 99 ka hatramin'ny $ 299 isan-taona), mandray ny asa izy ireo, ny fotoana, backups, ary ezaka mba hahazoana antoka fa misy ny bilaoginao ary mampahafantatra ny mpihaino anao. Azonao atao ny mifantoka amin'ny bilaogy fotsiny, mahita ireo hevitra mahaliana ireo ary mizara izany amin'ny hafa.
Ahoana ny WordPress.org, WordPress nampiantrano tena? Miaraka amin'ireo eritreritra rehetra etsy ambony ao amin'ny WordPress.com, maninona no tianao ny misintona sy mametraka WordPress amin'ny faritra Internet anao?
Ny antony lehibe mahatonga ny olona maro hanao izany dia satria mifehy bebe kokoa. Ny plugins sy ny widget izay nofidinao dia azo ampiasaina. Ohatra, raha mpaka sary ianao izay te-hamorona galerie-nao amin'ny asanao dia ny plugin plugin NextGen no ilainao. Na, raha te-hanamboatra endrika be dia be ianao amin'ny lohahevitra fototra toa azy Thesis or Genesis, avy eo WordPress.org ho anao.
Raha te-hanao doka anao manokana ianao, WordPress mampiantrano tena no ilainao. WordPress.com dia tsy mamela ny iray hanao doka afiliana na fanentanana hafa mitovy amin'izany (jereo ny naoty ao Advertising).
Ny WordPress nampiantrano tena dia manome fahafaha-manao bebe kokoa raha ny amin'ny setup sy ny fikirana. Na izany aza, miaraka amin'izany ny fanalefahana dia tonga ny andraikitra. Tompon'andraikitra amin'ny fampiantranoana ianao (ohatra amin'ny serivisy toa BlueHost), fikojakojana rindrambaiko bilaogy arak'izay ilaina (paikady voa amin'ny lenta), Ary backups.
Iza no hofidina? Raha orinasa ianao vao manomboka ny fitorahana bilaogy dia hanoro hevitra ny WordPress.com aho ary hifantoka amin'ny fampivelarana ny bilaoginao ho fampiharana. Ny anton'izany dia ny sandan'ny fotoananao: tianao ve futz (teny mahafinaritra ho an'ny fandaniam-potoana) manodidina? Ny tanjonao dia ny mifandray amin'ny mpihaino, ny mpanjifanao, tsy tapaka. Ny vidiny hanombohana, na dia miaraka amin'ny fonosana premium aza dia ambany raha oharina amin'ny fotoanao.
Ary raha tsy orinasa ianao ary te-hanana bilaogy fotsiny, dia mora ny manomboka ny maodely maimaim-poana WordPress.com. Averina indray, tsy mila futz ianao, mamela anao hifantoka amin'ny atiny sy ny fampiharana bilaogy.
Rehefa afaka enim-bolana, na toy izany, ny fanaovana bilaogy (isan-kerinandro, sa tsy izany?) Dia mety te-hamerina hijery ny fampiasanao WordPress.com ianao. Mieritrereta momba ny filàna tsikera momba ny orinasa na bilaogy mbola tsy voavaly. Miaraka amin'ireo filàna tsy voatanisa ireo dia afaka mandray fanapahan-kevitra momba ny fifindra-monina amin'ny bilaogy nampiantrano anao na tsia. Ary (ity misy singa tena lehibe iray) tsara tarehy ny fifindra-monina avy ao amin'ny WordPress.com mankany amin'ny WordPress.org mahitsy mandroso. Mila fandrindrana sy fanandramana izany fa efa fantatra tsara ny fizotrany.
Tags: nampiantranoWordPressWordPress hostingwordpress.com
John no Lehiben'ny Famoronana Vondrom-piarahamonina ao Truffle Media. Truffle Media Networks dia manome Ag Media Azonao ampiasaina, amin'ny alàlan'ny famokarana turnkey avo lenta sy fizarana fizarana haino aman-jery mifantoka amin'ny orinasa.
Ny tsipika fivorian'ny Autoresponder
Ahoana no tsy hialana sasatra momba ny marketing amin'ny atiny
Mar 13, 2013 ao amin'ny 7: PM PM
Tsy maintsy miombon-kevitra tanteraka aminao aho, 100% amin'ity iray ity, John! 🙂 Nomarihinao fa ny fanaraha-maso dia tsy fahampian'ny fampiantranoana ao amin'ny WordPress.com – tsy fanaraha-maso fotsiny ny widgets sy ny lohahevitra ary ny dokam-barotra. Izy io koa dia mifehy ny fanatsarana sy ny caching. Tranonkala mampiantrano tena amin'ny WPEngine manana fotodrafitrasa matanjaka kokoa, fitantanana sehatra, fanaraha-maso fiarovana, backups, faritra fanaovana fampisehoana, console fitantanana redirect, tamba-jotra fanaterana votoaty, rafitra caching manara-penitra, fidirana amin'ny lahatahiry faka, fanaraha-maso ny mpampiasa… latsaky ny $99 avokoa. isam-bolana. Aza atao ambanin-javatra ny fametrahanao WordPress amin'ny fametrahana azy ao amin'ny WordPress.com – tena fandaniam-potoana izany.
Mar 15, 2013 amin'ny 1: 16 AM
Tsy maintsy miombon-kevitra amin'i Doug momba an'io koa aho. Amin'ny farany, mety tsy dia manahirana loatra ny mandeha miaraka amin'ny iray hafa rehefa tonga amin'izany daholo izany, fa mahazo fifehezana bebe kokoa ianao rehefa mandeha amin'ny lalana nampiantranoana anao. Ankehitriny, raha misy olona te-hitrandraka WordPress sy “kick the pneus” raha lazaina, dia manangana tranokala manokana amin'ny vahaolana .com raha tena tsy te handany vola ianao. Tsara lavitra noho ny Blogger izany, fa raha toa ianao ka na dia kely aza dia matotra amin'ny zavatra ataonao amin'ny Internet. Mandehana miaraka amin'ny vahaolana .com, ary na iza na iza mila fanampiana amin'ny fanamboarana sy fanamboarana zavatra ho azy ireo, ampahafantaro ahy fotsiny.
Mar 15, 2013 amin'ny 1: 18 AM
Ary koa, WP Engine (rohy aff), manana safidy $29/mnth ho an'ny tranokala tokana. Serivisy lehibe, fanohanana lehibe.
25 Jiona 2013 à 9:59
lahatsoratra mahafinaritra ity!
misaotra amin'ny fanazavana! hizara…